Blockchain News 29 Ndira 2018 - Blockchain News
Ndira 29, 2018 arun
Rimwe Japan guru zvemagetsi muzvitoro zvino Yamada Denki anogamuchira Bitcoin
Yamada Denki, mumwe Japan guru Electronics zvitoro, akazivisa vari kugamuchira Bitcoin sezvo muripo nzira.
Vari vaishanda pamwe Bitflyer, uye kuti zvichengete kukura itsva, Bitflyer unopa chipo 500 Yen wokutanga 500 Vatengi kubhadhara pamwe rakapotsa Forex.
South Korea kuti retailer uye e-zvokutengeserana hofori WeMakePrice kugamuchira 12 cryptocurrencies
WeMakePrice, inonziwo Wemepu, mumwe South Korea guru, e-commerce platforms uye retailers zvikuru ari kuronga pamusoro kugamuchira 12 cryptocurrencies, kusanganisira Bitcoin, vari pamwe chete Bithumb, nyika guru cryptocurrency Exchange.
WeMakePrice ari achiwedzera cryptocurrencies kuti huripo kubhadhara ayo pachikuva OneThePay. Pakangotanga kusangana zvakakwana, huripo WeMakePrice vanozvishandisa vachakwanisa kutenga zvinhu uye mabasa vachishandisa cryptocurrencies.
Mubvunzurudzo pamwe South Korean dzacho nhau nzira yokubudisa HanKyoReh, mumwe WeMakePrice Mutauriri akataura kuti kambani kwasvika chisarudzo kusanganisa cryptocurrencies somunhu chikamu chikuru kutanga kuderedza muripo muitiro kungopa vatengi.
"…kuti mari yamunenge vatengi vedu uye vatengi. We funga Mobile fintech Apps, pfungwa, uye cryptocurrencies sezvo nyatsoshanda mubhadharo nzira,"Akadaro mutauriri.
Chekambani pamutemo mashoko ambotaurwa: "Bitcoin mubhadharo basa… nani basa uye nyore. "
BTCC akawana Hong Kong anotsanangura blockchain inivhesitimendi Fund
Bitcoin kuchera uye exchanges conglomerate BTCC kwave akawana Asina Hong Kong anotsanangura blockchain inivhesitimendi Fund. Zvinhu zvichakubatsira mari BTCC neInternational chikuru sezvo haazotaurwizve Chinese musika.
Bhizimisi BTCC ave kwakaderedza noruoko pamutemo mutswe-zasi China, iyo yarambidza cryptocurrency zvokutengeserana pamusoro exchanges anobva munyika. Beijing zvino ane Bitcoin kuchera racho pfuti zvisakamboonekwa, maererano achangobva kubuda ari FT uye kumwewo.
MUTAURIRI BTCC akati: “We Pari havasi achisunungura ruzivo pamusoro mari kana uwandu zvinhu kumutswa.”
The BTCC Exchange nhumbi kupfuura $25 bhiriyoni kukosha Mari 2017. BTCC raMwari Mobi chikwama, iyo wakatangwa muna March 2017, zvino vatengi kubva 180+ nyika, akawedzera mutauriri.
Mumashoko BTCC co-muvambi Bobby Lee akati: “Yanhasi kutora chinhu anoshamisa kufambira mberi kukuru BTCC kuti validates zvose basa redu nesimba mumakore mashoma apfuura. Ndine kufara chaizvo pamusoro zvinhu izvi anopa BTCC kutama nokukurumidza uye rinopikisa kukura mabhizimisi edu 2018 uye kupfuura.”
Anenge gumi apfuura ...
Previous Post:Blockchain News 28 Ndira 2018
Next Post:Blockchain News 30 Ndira 2018